Pirimiyar Liigii: Walaayittaa Dichaa Adaamaa kanamaa dirreesaa irratti keessummeessa
Saturday, 27 February 2016 07:25
Finfinnee: Guraandhala 18, 2008 (oromiapo) Tapha torban 11ffaa Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa har’a geggeeffamuun Walaayittaa Diichaa Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Dirreesaa Bodittii irratti keessummeessa.
Pirimiyar Liigicha sadarkaa lammaaffaa irra kan jiru Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa fi Walaayittaa Diichaa taphasaanii sa’a 9:00 irratti geggeessu.
Taphichi geggeeffamuuf kan ture Sanbat-duraa ta’us Fedareeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa sagantaa waan jijjiireef har’a taphatama.
Friday, 26 February 2016 13:49
Finfinnee: Guraandhala 18, 2008 (Oromiyaa) Tapha torban 11ffaa Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa har’a geggeeffamuun Walaayittaa Diichaa Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Dirreesaa Bodittii irratti keessummeessa.
Pirimiyar Liigichi taphoota torban 12 Dilbata taphatamnaiin kan itti-fufu yammuu ta’u, Dilbata sa’a 9:00 irratti Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Arbaaminc Buna Sidaamaa waliin Arbaamincitti, Biiraan Daashan Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Hawaasaa waliin Isteediyamii Bahir Daar irratti akkasumas sa’a 11:30 irratti Dadabiit Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dawaa waliin Isteediyamii Finfinnee irratti taphatu.
Wiixata gaafa Gur’aandha 21, 2008 sa’a 11:30 irratti Bunni Itiyoophiyaa Hadiyyaa Hosaa’inaa waliin Isteediyamii Finfinnee irratti nitaphatu.
Taphichi Kamisa Guraandhala 24, 2008 itti-fufee kan geggeeffamu yoo ta’u, sa’a 9:00 irratti Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa dirreesaa Adaamaa Isteediyamii Abbabaa Biqilaa irratti kan keessumeessu ta’a.
Taphi guyyaa sana geggeeffamu biraan Elektirikni Walaayittaa Dichaa waliin sa’a 11:30 irratti Isteediyamii Finfinneetti kan wal-morkanidha.
Akkasumas taphoonni Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 13ffaa Jimaata Guraandhala 25, 2008ii jalqabee ggeeggeeffamu.
Haala kanaan Jimaata Guraandhala 25 sa’a 9:00 irratti Hawaasaatti Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Hawaasaa Qiddus Giyoorgis waliin akkasumas Yirgaalamitti Bunni Sidaamaa Biiraa Daashan waliin kan taphatan ta’a.
Dilbata Guraandhala 27, 2008 ammoo Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dawaa Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Arbaaminc dirreesaa Direedawaatti sa’a 9:00 irratti kan keessummeessu yammuu ta’u, sa’aatii wal-fakkaataatti Hadiyyaa Hosaa’inaan Daddabiitiin Hosaa’inaatti nikeessummeessa.
Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa Taphoota torban 11ffaa afur nannoorratti geggeeffamuunsaanii niyaadatama.
Taphoota kanaanis taphi Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dawaa fi Buna Itiyoophiyaa gidduutti geggeeffame 1 fi 1n wayita xumuramu, Elektirikni Hadiyyaa Hosaa’inaa qabxii 1 fi 0n moo’ateera.
Akkasumas tapha Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Hawaasaa fi Bulchiinsa Magaalaa Arbaaminc taphatan 3 fi 1n kan xumurame yammuu ta’u, taphi Bunni Sidaamaa fi Dadabiit taphatan qabxii wal-qixa 2 fi 2 xumuramuunsaa niyaadatama.
Pirimiyar Liigicha Qiddus Giyoorgis qabxii 23n wayita dursu, Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa qabxii wal-qixaan hiree gooliidhaan caalamee sadarkaa lammaffaarra jira.
Dadabiit gamasaatiin qabxii 19n sadaffaa ta’ee yeroo itti aanu, Bunni Sidaamaa qabxii 18n sadarkaa 4ffaa qabatee jira.
Garee biyyaalessaa kubbaa miilaa Dubartoota Itiyoophiyaatiif taphattoonni 25 filataman
Friday, 26 February 2016 13:47
Finfinnee Guraandhala 16,2008(Oromiyaa) Garee biyyaalessaa kubbaa miilaa Dubartoota Itiyoophiyaa(Luusiiwwan) waancaa Afrikaa 10ffaaf qophaa’uuf taphattoonni 25 filatamaniiru.
Federeshiniin kubbaa miilaa Itiyoophiyaa akka himetti taphattoonni kun kan filatamuun ifoomsaman dorgommichaaf qophii barbaachisaa akka taasisaniifi.
Akkaatuma kanaan leenjisaa Biraanuu Gizaaw akkaataa murteessaniin:
Daagimaawi Makonnin(Baankii Daldalaa)
Tigist Ma’aazaa(Baankii Daldalaa)
Taarikuwaa Bargannaa(Dirree Dawaa)
Tsiyoon Isxifaanoos(Baankii Daldalaa)
Itsagannat Buzunah(Baankii Daldalaa)
Haabtaam Isheetuu(Baankii Daldalaa)
Faasikaa Baqqala(Biiraa Daashin)
Hassaabee Mukkoo(Biiraa Daashin)
Tigist Boggaala(Baankii Daldalaa)
Hiyoot Dangisoo(Baankii Daldalaa)
Biruuktaawiit Girmaa(Baankii Daldalaa)
Yakkaatiit Mangistuu(Buna Sidaamaa)
Shittaayee Sisaay(Baankii Daldalaa)
Rahimaa Zargaaw(Baankii Daldalaa)
Helan Isheetuu(Biiraa Daashin)
Madiinaa Awwal(Yuuniivarstii Qiddista maariyaam)
Tidag Fissahaa(Wiirtuu leenjii Xirunash Dibaabaa) irraa filatamaniiru.
Luusiiwwan Itiyoophiyaa tapha gulaala jalqabaa garee Aljeeriyaa wajjin Guraandhala 25 hanga Bitootessa 11 bara 2008’tti ni taasisu.
Morkiin marsaa duraa Aljeerisitti kan deebii ammoo Finfinneetti akka taasifamudha kan himame.
Itiyoophiyaan ALA bara 2012 waancaa kubbaa miilaa Afrikaaf morkii taasifameen sadarkaa 4ffaa qabachuun xumurtee jirti.
Shaampiyans Liigii: Arsenaalii fi Baarseloonaan Emireets irratti wal-morkatu
Friday, 26 February 2016 13:46
Finfinnee: Guraandhala 15, 2008 (FBC) Shaampiyans Liigii Yuurooppiin Arsenaal har’a galgala dirreesaa Emireets irratti Baarseloonaa nikessummeessa.
Leenjisaan garee Arsenaal Arsan Veengar Shaapiyans Liigii Yuurooppiin Baarseloonaa mo’achuuf morkii har’aa kan caalu carraan nu hin-quunnamu jedhaniiru.
‘Kanaafis tapha har’a dirree keenyaarratti taphatamu injifannoon xumuruuf carraalee arganne hunda fayyadamuu fi gama ittisuunis ta’e jifachuutiin gaarii socho’uun gooliin akka nutti hin-lakkaa’amneef nicarraaqna’ jedhaniiru.
Tapha har’aa irratti Waancaa FA Hal Siitii waliin ture irratti boqonnaan kennameefii kan turan Masuut Oziil, Aroon Raamsee fi karra eegaan Piitar Cheek hiriiranii nitaphatu.
Gama Baarseloonaatiin boqonnaadhaa kan deebi’e Taphataan Sarara Ittisaa - Jeeraard Piikee fi adabbiirra kan ture Taphataan Sarara Gidduu -Sarjiyoo Buuskeets tapha har’aa irratti hiriiranii taphachuuf qophaa’aniiru.
Baarseloonaan Leenjisaa Liwis Eniriikeedhaan hogganamee taphoota 32 barana geggeesse hin-moo’amne.
Baarseloonaatti wal-ta’iinsa sodaachisaa kan uuman Liyooneel Meesii, Liwis Siwaareez fi Neymaar bara dorgommii kanaarratti wal-tumsanii goolota 91 galchuu danda’aniiru.
Qaama garee kanaa ta’uu koof nan gammada; tokkoon tokkoo taphataa isarraa maal akka eegamu waan beekuuf Baarseloonaa leenjisuun baay’ee salphaadha’ jedhaniiru leenjisaa Liwis Enirikee.
Baarseloonaan A.L.A 2010 fi 2011 irratti waltajjiima kanaarratti Arsenaaliin dorgommii keessaa baasuunsaa hin-dagatamu.
Kana malees, Baarseloonaan tapha xumuraa Shaampiyans liigii Paaris 2006 irratti mul’ata waancaa kaasuu Arsenaal duraa gufachiisuunsaa niyaadatama.
Har’a galgala sa’a 4:45 irratti Morkii Shaampiyans Liigii Yuuroop Isteediyamii Emireets irratti geggeeffamu irratti Arsenaal seenaa haaraa kan itti galmeessisu ta’aa laata?
Taphataan murteessaadhaaf kaardii diimaa baase innumtuu dirree keessaa baafame
Friday, 26 February 2016 13:44
Finfinnee Guraandhala 14,2008(Oromiyaa) Liigii Turkiin taphataan murteessaa kubbaa miilaatiif kaardii diimaa baase sababa kaardii baaaseetiin dirree keessaa akka ba’u taasifameera.
Kilabiin kubbaa miilaa Tiraazoon jedhamu kaleessa liigii Turkiin gitasaa Gaalaataasaaraay wajjin taphachaa ture.
Kilabichi Gaalaataasaaraayin 2fi1 utuu duurfamaa jiruu daqiiqaa 86ffaa irra ga’a.
Maarree daqiiqaa 86ffaa irratti Tiraazoon spoort iddoo rukuttaa adabbiitti balleessaa waan raawwateef taphataan kun dirree keessaa akka ba’uuf murteessaan hoogganaa turan kaardii diimaa itti mul’isu.
Battala kanatti taphattoonni kilabii Tiraazoon spoort murteessaa morkichaa Deeniiz Biinteel marsuudhaan waca eegaluun mormiisaanii dhageessisu.
Taphataan Saaliih Dursaan jedhamuufi mudannoo kanaan dallanes mormiirra darbuudhaan kaardii diimaa murteessaan harkaa qaban irraa butuudhaan murteessaatti mul’isa.
Duursaan gocha seeraan ala raawwate kanaan tapha keessaa akka ba’u taasifameera.
Sababa kanaan kilabiinsaas taphattoota 7 qofaan morkiisaa itti fufuuf dirqameera.
Kilabiin Tiraabzoon spoort murteessaa wajjin yoo falmu inni ammaa kan jalqabaa miti jedhameera.
Hojii raawwachiisaan kilabichaa Ibraahiim Haakiyoo Maagiluu kanaan dura murteessaa wajjin waan wal lolaniif baatii Amajjii darbe guyyoota 280 sochii kubbaa miilaa kamirraayyuu qoqqobamaniiru.
Dorgommiin fiigicha Dubartootaa 12ffaan har’a dorgomame
Itiyoophiyaan shaampiyoonaa Atileetiksii Afrikaa 12ffaa sadarkaa 3ffaa qabachuun xumurte
Torbe Kana 47543
Ji'a Kana 91384
01/05/07 irraa eggalee 7194253
Kan Amma Daawwachaa Jiran 56